အမျိုးသားတွေအတွက် အသက်ရှည်ဆေး ၉ မျိုး - Real Gaming Myanmar
အမျိုးသားတွေအတွက် အသက်ရှည်ဆေး ၉ မျိုး
Telegraph သတင်းအရ အမျိးသမီးတွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် အမျိုးသားများထက် အသက်ပိုရှည်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ အသက်၈၃ နှစ်ထိနေနိုင်လျှင် အမျိုးသားကတော့ ၇၉ နှစ်အထိသာ နေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် …. ။
အကွာကြီးတော့ မကွာခြားပါဘူး။ လေ့လာမှုတွေအရ အမျိုးသမီးတွေမှာ X chromosome လို့ခေါ်တဲ့ ဗီဇမျိုးဟာ ၂မျိုးရှိပြီး အမျိုးသားတွေမှာတော့ တစ်မျိုးတည်းသာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ် …. ။
လေ့လာသူများက အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ဘဝမှာ သက်တမ်းရှည်ရှည် နေသွားနိုင်စေရန် အောက်ပါ အလေ့အကျင့် ၈ခုကို ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ် …. ။
လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် အမျိုးသားတွေဟာ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုများရှိလာပြီး စိတ်ကျေနပ် ပျော်ရွှင်တဲ့ဟော်မုန်းများထွက်ကာ အမျိုးသားတွေအတွက် ကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိစေပါတယ် …. ။
ဒါကတော့ တစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အလုပ်တွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးနေရတဲ့ကြားထဲမှာ ဘယ်လိုအိမ်ထောင်ပြု လက်ထပ်မလဲလို့ မေးစရာရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ လက်ထပ်တဲ့ အသက်အရွယ်ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ် …. ။
လေ့လာမှုတွေအရ အသက် ၂၅ကျော်ပြီးမှ အိမ်ထောင်ပြုသူတွေဟာ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ အိမ်ထောင်ပြုသူတွေထက် ပိုပြီး ကျန်းကျန်းမာမာ အသက်ရှည်ရှည် နေသွားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် …. ။
အဖေတစ်ယောက်ဖြစ်ရခြင်းဟာ ဝမ်းသာစရာ ကိစ္စပါ။ သို့သော် ကြိုးစားဖို့ နဲ့ အာရုံဝင်စားမှုရှိဖို့တော့ လိုပါတယ် ….. ။
လေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေအရ အသက်၆၀အရွယ် မိဘဖြစ်လာတဲ့ အမျိုးသားတွေကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ သားသမီးရှိနေသူတွေက ပုံမှန်ထက် ၂နှစ် အသက်ရှည်ပြီး အမျိုးသမီးတွေကတော့ တစ်နှစ်ခွဲခန့် ပိုပြီး အသက်ရှည်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ….. ။
တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်ဟာ လူမှုဘဝမှာတင် အဆင်ပြေရုံသာမက သင့်ကို အသက်ရှည်ရှည် နေသွားနိုင်ဖို့လည်း အထောက်အကူပြုပါတယ် …. ။
အမျိုးသားများ သေဆုံးရခြင်း အများစုမှာ နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာ နှင့် လေဖြတ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေဟာ သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားမှု၏ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါများဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ် သွေးပေါင်ချိန်မတက်အောင် အမြဲဂရုစိုက် ထိန်းသိမ်းပါ …. ။
တစ်နေ့လျှင် ဝိုင်အနည်းငယ်သောက်ပေးခြင်းက ကျန်းမာရေးကို များစွာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ လေ့လာမှုအရ အခြား အရက်သောက်သူများထက် ဝိုင်သောက်တဲ့ အမျိုးသားများက အသက်၂ နှစ်ပိုရှည်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ….. ။
အတတ်နိုင်ဆုံး ဆေးလိပ်မသောက်ပါနှင့်။ စွဲနေသူများကလည်း တဖြေးဖြေးချင်း လျှော့ချပြီး ဖြတ်ကြည့်ပါ ….. ။
၈။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဆောင်ပါ။
နေ့စဉ် နာရီဝက် ၊ တစ်နာရီခန့် ကိုယ်လက် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းများ ပုံမှန် ပြုလုပ်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာ အမျိုးသားတွေအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါ အဖက်ဖက်မှ ကောင်းကျိုးများစွာ ပေးပါတယ် ….. ။
၉။ အမျိုးသမီးရဲ့ ရင်သားကို ကြည့်ရှုပါ။
ယုံချင်ယုံ၊ မယုံချင်နေပါ ။ ဒီလိုကြည့်ခြင်းက အမျိုးသားတွေကို အသက်ရှည်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ (မှတ်ချက်။ ။ကြည့်ရုံသာ…)
Telegraph သတငျးအရ အမြိးသမီးတှဟော ပုံမှနျအားဖွငျ့ အမြိုးသားမြားထကျ အသကျပိုရှညျတယျလို့ သိရပါတယျ။ ယဘေုယအြားဖွငျ့ အမြိုးသမီးတဈဦးဟာ အသကျ၈၃ နှဈထိနနေိုငျလြှငျ အမြိုးသားကတော့ ၇၉ နှဈအထိသာ နနေိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ …. ။
အကှာကွီးတော့ မကှာခွားပါဘူး။ လလေ့ာမှုတှအေရ အမြိုးသမီးတှမှော X chromosome လို့ချေါတဲ့ ဗီဇမြိုးဟာ ၂မြိုးရှိပွီး အမြိုးသားတှမှောတော့ တဈမြိုးတညျးသာ ရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ …. ။
လလေ့ာသူမြားက အမြိုးသားတှအေနနေဲ့ ဘဝမှာ သကျတမျးရှညျရှညျ နသှေားနိုငျစရေနျ အောကျပါ အလအေ့ကငျြ့ ၈ခုကို ဖျောပွပေးခဲ့ပါတယျ …. ။
လိငျဆကျဆံခွငျးကွောငျ့ အမြိုးသားတှဟော ဟျောမုနျးပွောငျးလဲမှုမြားရှိလာပွီး စိတျကနြေပျ ပြျောရှငျတဲ့ဟျောမုနျးမြားထှကျကာ အမြိုးသားတှအေတှကျ ကောငျးကြိုးတှကေို ရရှိစပေါတယျ …. ။
ဒါကတော့ တဈမြိုးဖွဈနိုငျပါတယျ။ အလုပျတှေ၊ စိတျဖိစီးမှုတှနေဲ့ ရှုပျထှေးနရေတဲ့ကွားထဲမှာ ဘယျလိုအိမျထောငျပွု လကျထပျမလဲလို့ မေးစရာရှိလာနိုငျပါတယျ။ ဒါဟာ လကျထပျတဲ့ အသကျအရှယျပျေါမှာ မူတညျပါတယျ …. ။
လလေ့ာမှုတှအေရ အသကျ ၂၅ကြျောပွီးမှ အိမျထောငျပွုသူတှဟော ငယျရှယျစဉျမှာ အိမျထောငျပွုသူတှထေကျ ပိုပွီး ကနျြးကနျြးမာမာ အသကျရှညျရှညျ နသှေားနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ …. ။
အဖတေဈယောကျဖွဈရခွငျးဟာ ဝမျးသာစရာ ကိစ်စပါ။ သို့သျော ကွိုးစားဖို့ နဲ့ အာရုံဝငျစားမှုရှိဖို့တော့ လိုပါတယျ ….. ။
လလေ့ာတှရှေိ့မှုတှအေရ အသကျ၆ဝအရှယျ မိဘဖွဈလာတဲ့ အမြိုးသားတှကေို လလေ့ာကွညျ့တဲ့အခါ သားသမီးရှိနသေူတှကေ ပုံမှနျထကျ ၂နှဈ အသကျရှညျပွီး အမြိုးသမီးတှကေတော့ တဈနှဈခှဲခနျ့ ပိုပွီး အသကျရှညျတယျလို့ ဆိုပါတယျ ….. ။
တာဝနျယူတတျတဲ့စိတျဟာ လူမှုဘဝမှာတငျ အဆငျပွရေုံသာမက သငျ့ကို အသကျရှညျရှညျ နသှေားနိုငျဖို့လညျး အထောကျအကူပွုပါတယျ …. ။
အမြိုးသားမြား သဆေုံးရခွငျး အမြားစုမှာ နှလုံးရောဂါ၊ ကငျဆာ နှငျ့ လဖွေတျခွငျးတို့ကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ဒါတှဟော သှေးပေါငျခြိနျမွငျ့မားမှု၏ နောကျဆကျတှဲ ရောဂါမြားဖွဈပွီး မိမိကိုယျကိုယျ သှေးပေါငျခြိနျမတကျအောငျ အမွဲဂရုစိုကျ ထိနျးသိမျးပါ …. ။
တဈနလြေှ့ငျ ဝိုငျအနညျးငယျသောကျပေးခွငျးက ကနျြးမာရေးကို မြားစှာ အထောကျအကူ ဖွဈစပေါတယျ။ လလေ့ာမှုအရ အခွား အရကျသောကျသူမြားထကျ ဝိုငျသောကျတဲ့ အမြိုးသားမြားက အသကျ၂ နှဈပိုရှညျတယျလို့ ဆိုပါတယျ ….. ။
အတတျနိုငျဆုံး ဆေးလိပျမသောကျပါနှငျ့။ စှဲနသေူမြားကလညျး တဖွေးဖွေးခငျြး လြှော့ခပြွီး ဖွတျကွညျ့ပါ ….. ။
၈။ ပုံမှနျလကေ့ငျြ့ခနျး လုပျဆောငျပါ။
နစေ့ဉျ နာရီဝကျ ၊ တဈနာရီခနျ့ ကိုယျလကျ သှေးပူလကေ့ငျြ့ခနျးမြား ပုံမှနျ ပွုလုပျပါ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခွငျးဟာ အမြိုးသားတှအေတှကျ စိတျပိုငျးဆိုငျရာရော ရုပျပိုငျးဆိုငျရာကိုပါ အဖကျဖကျမှ ကောငျးကြိုးမြားစှာ ပေးပါတယျ ….. ။
၉။ အမြိုးသမီးရဲ့ ရငျသားကို ကွညျ့ရှုပါ။
ယုံခငျြယုံ၊ မယုံခငျြနပေါ ။ ဒီလိုကွညျ့ခွငျးက အမြိုးသားတှကေို အသကျရှညျစတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ (မှတျခကျြ။ ။ကွညျ့ရုံသာ…)
Previous: မျက်နှာပေါ်ရေ နွေးဝတ်တင်ခြင်း၏ အံ့မခမ်းဖွယ်အကျိုး